छुवाछुतको घटनामा प्रधानमन्त्रीको चासो तिर्ब, कारवाहीका लागि बझाङ सिडियोलाई निर्देशन « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » छुवाछुतको घटनामा प्रधानमन्त्रीको चासो तिर्ब, कारवाहीका लागि बझाङ सिडियोलाई निर्देशन
छुवाछुतको घटनामा प्रधानमन्त्रीको चासो तिर्ब, कारवाहीका लागि बझाङ सिडियोलाई निर्देशन
२०७३ भाद्र २१, जागरण मिडिया सेन्टर,
काठमाडौं–मन्दिर छोएको आरोपमा एक जना दलितलाई जरिवाना गराइएको बझाङको समाचारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो व्यक्त गरेका छन् । उनले बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनाललाई घटनाको छानविन गरी आबश्यक कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रामदीप आचार्यले आफुले फोन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देश दिएको बताए । ‘रातोपाटीमा प्रकाशित समाचारमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको थियो । त्यसपछि बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर घटनाको छानविन र आबश्यक कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।’ जनसम्पर्क सल्लाहकार आचार्यले भने ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले कानुन हातमा लिने व्यक्तिमाथि आबश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
बझाङको रिलु -८ द्धारीमा लागेको हरेलो मेलामा स्थानिय दलितले मन्दिर छोएको भन्दै सुनसहित नगद दण्ड जरिवान तिराइएको समाचार हिजो मात्र रातोपाटीमा प्रकाशित भएको थियो ।
रिलु गाविस घरभएका लालबहादुर आग्रीलाई एक आना सुन सहित २ हजार नगद दण्ड तिराइएको थियो । उपल्ला जातिका भनिनेहरुले भक्तजनहरुका लागि प्रसाद पकाउदै लागेको स्थान र कालीका देवीको मन्दिरमा प्रवेश गरेको आरोप लगाएका छन् ।
हिजो प्रकाशित समाचार यस्तो थियो – बझाङमा अर्को कलंक, दलितले मन्दिर छुँदा १ आना सुन र २ हजार जरिवाना !
– See more at: http://www.ratopati.com/news/76755/#sthash.LzBXxSnp.dpuf
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य on September 6, 2016 .
← दलितले मन्दिर छुँदा १ आना सुन र २ हजार जरिवाना !	१० हजार ऋण नपाउँदा तीन महिना देखि ओछ्यानमा ,कसैले ऋण पत्याएनन् →